Mwepu nkewa: ihe niile ị chọrọ ịma | Ngwaike efu
Isaac | 26/10/2021 08:39 | Emelitere ka 29/09/2021 12:54 | Ihe eletrọniki
N'ime ihe ndị eletrọnịkị e nyochara bụkwa nke toroidal onye na-agbanwe, na mgbakwunye na anyị na-emesokwa ụdị ihe ndị a mgbe anyị na-ekwu maka ike ọkọnọ. ụdị nke ugbu a, wdg. Ugbu a, ọ bụ ntụgharị nke ụdị ntụgharị ọzọ pụrụ iche, dị ka nke iche iche transformer.
Nwere ike mara ihe ọ bụ, Kedu ihe ọ bụ, ọdịiche dị na ụdị mgbanwe ndị ọzọ, yana otu esi ahọrọ otu n'ime ha maka ọrụ gị n'ọdịnihu.
1 Gịnị bụ iche iche transformer?
1.2 Uru nke ihe ngbanwe dịpụrụ adịpụ
1.3 Ngwa mgbanwe nchekwa nchekwa
2 Ebe ị ga-azụta transformer iche
Gịnị bụ iche iche transformer?
na ọkụ eletrik Ha nwere ihe onwunwe nke ịnyefe ume n'etiti windings abụọ ma ọ bụ karịa na-enweghị njikọ anụ ahụ n'etiti ha. Naanị ihe ga-abụ ndị na-eme mgbanwe akpaaka. Iji mepụta nnyefe a, a na-adabere na induction electromagnetic, na n'ozuzu, a na-eji ntụgharị ma ọ bụ obere mee ihe na windings ha iji gbanwee voltaji.
N'ihi nke ahụ iche n'etiti sekitEbe ọ bụ na otu na-ejikọta ya na ikuku nke mbụ na nke ọzọ na ikuku nke abụọ, ọ bụghị nanị na a ga-agbanwe mgbaàmà ahụ, ha nwekwara ike ime dị ka ihe nchekwa.
N'ezie, mgbe anyị na-ezo aka nchekwa nchekwa ma ọ bụ iche iche transformer, anyị na-agwa nnọọ kpọmkwem transformer okwu Nkeji 1: 1, ya bụ, na otu winding na ya abụọ coils (otu ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị), ya mere ọ dịghị agbanwe voltaji. Mmepụta gị ga-adaba na ntinye gị.
N'ihi nke a, a na-eji ha eme ihe nche ngwa, mgbe ịchọrọ ịnyefe ọkụ eletrik site n'otu sekit gaa na nke ọzọ ma ịchọrọ ịmegharị ha abụọ.
N'ime nchekwa nchekwa, ma ọ bụ iche, ị nwere ike ịhụ isi ihe abuo:
Otu oge: nwere ihuenyo arụnyere n'etiti winding nke mbụ na nke abụọ, nke ejikọrọ na ọdụ mkpuchi mkpuchi. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ekpuchi ihe nkwụnye nkwụnye ahụ site na isi ihe ntụgharị. Ndị a nwekwara ihe mmetụta okpomọkụ arụnyere n'ime ya, ma nwee ọkwa mkpọtụ dị ala. Ọ na-eji usoro na-anọpụ iche, yana yana ntinye voltaji nke 220V ma ọ bụ 230V n'ozuzu ya.
Triphasic: o nwekwara ihe owuwu nhata na otu nkeji, mana na nke a maka nrụnye nke atọ. Ya bụ, otu usoro bụ ihe a na-ahụkarị maka ngwa ụlọ, ebe a na-ahụkarị nrụnye usoro atọ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nrụnye azụmahịa. Nrụnye ndị a enweghị naanị otu akụkụ na otu eriri na-anọpụ iche, mana a na-ekewa ya na mmiri ma ọ bụ akụkụ atọ na-agbanwe agbanwe iji kesaa ike nke nrụnye. N'okwu a, ha na-akwado 380 ma ọ bụ 480V.
Uru nke ihe ngbanwe dịpụrụ adịpụ
Inwe iche iche transformer nwere ike inwe usoro nke uru maka nrụnye eletriki, dị ka:
Ha dị mkpa iji kpuchido ọkụ eletrik, dịka ọmụmaatụ, iji chekwaa ọkụ eletrik.
Ha na-ahụ na e nwere ọkụ eletrik na-echebe nrụnye. Ha dị mma maka nrụnye dị elu.
Ọnwụ ya dị ala karịa nke ụdị mgbanwe ndị ọzọ.
A haziri ma jiri ọtụtụ mkpuchi mkpuchi mesie ike, nke na-enye nnukwu ike na nchekwa.
Ngwa mgbanwe nchekwa nchekwa
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ngwa nke ụdị a iche ma ọ bụ nchekwa nchekwa, dị na ọtụtụ nrụnye eletriki na ngwaọrụ. Dị ka ọmụmaatụ:
Iji chebe ndị ọrụ pụọ na ujo eletrik. Ma na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ obodo na-eji usoro atọ na otu nkeji.
N'ime ụfọdụ isi mmalite ike maka akụrụngwa nwere mmetụta.
Igwe ime ụlọ arụ ọrụ siri ike.
Ngwa ụlọ nyocha na ụfọdụ akụrụngwa ọkọnọ ọkụ maka ụlọ ọrụ eletrọnịkị.
Dị ka ihe nzacha mkpọtụ eletrik, kewapụ ntinye na mmepụta.
Nke bụ eziokwu bụ na nhọrọ dị nnọọ iche iche.
Ebe ị ga-azụta transformer iche
Ọ bụrụ na ị na-achọ a iche iche transformer na ezi price, Ị nwere nhọrọ dị iche iche, n'etiti ha, otu n'ime ndị kasị ewu ewu bụ ịchọ ya na Amazon ahịa ikpo okwu. Dịka ọmụmaatụ, ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ:
Akozon ndị ntụgharị pụrụ iche maka ngwa ọdịyo. Enwere iberibe 10 ma ha bụ 1: 1.
ZCX mgbanwe iche iche 1: 1, na ntinye 220v na mmepụta 220v. Na-akwado ruo 10W.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Mgbanwe dịpụrụ adịpụ: ihe niile ịchọrọ ịma